Soosaarka baaldi waraaqaha Shiinaha iyo Warshad | JAHOO
Qeexitaanka sheyga Cabbirka Cabbirka Waxyaabaha Xidhmada Xajmiga Xajmiga (cm) Dhirbaaxo & Waraaq Digaag ah oo Baaldi 32oz 11.6 * 8.9 * 14.5 230g + 18pe 10pks * 50pcs 60 * 25 * 57 46oz 12.0 * 8.9 * 17.7 230g + 18pe 10pks * 50pcs 62 * 26 * 59 64oz （gaaban & dufan） 16.7 * 13 * 13.7 ...
Cabbirka Kiiska ee (cm)
Baaskiil & Digaag digaag ah oo baaldi lagu duubay
64oz （gaaban & dufan）
64oz （dheer & dhuuban）
350 + hal PE
Sanduuqa digaagga shiilan Baaldi warqad la tuuri karo Qaadista iyo u adeegida digaagga shiilan iyo waxyaabaha kale ee cuntada kulul. Warqad lagu daweeyay iska caabbinta dufanka iyo daadashada.
Cunto ha ahaato ama cunto cusub, markaad u baahato inaad iibiso ama aad rarto cuntada ama aad dhahdo haddii aad rabto inaad ku bixiso adeeg gaarsiinta guriga cuntada markaa baakadaha waraaqaha ah ayaa ku imaan kara waxtar dhab ah.
Baakadaha cuntada lagu sameeyo ee waraaqda ah ayaa ugu habboon cuntada iyo wax soo saarka macaamiisha suuqa.
Tiknoolajiyadayada ugu dambeeya, baakadaha waraaqaha ayaa fure u noqday keydinta iyo iibinta badeecooyinka wax lagu cuno ee suuqa iyadoo la adeegsanayo firfircoonaan joogto ah. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee maskaxda lagu hayo inta la iibinayo wax u nugul sida cuntada oo kale ayaa ah in la hubiyo in tayadiisu ay tahay mid aan kala leexanayn oo baakadaha waraaqaha ee cunnada lagu caawiyo.
Baahida badan ee noocan ah baakadaha ayaa ka jira warshadaha cuntada.
Shirkado badan oo waaweyn ayaa ku tiirsan warshadaha baakadaha si ay u bixiyaan xirmooyin ku habboon alaabtooda.
Muxuu adeegu qabtaa Baakad Jahoo bixin?
1.Sample ayaa si bilaash ah loogu siiyaa alaabada waraaqahayaga lagu dhejiyo.
Waqtiga 2.Lead dhakhso, 10000 mitir laba jibbaaran, 50 mashiinada wax soo saarka si loo hubiyo in amarkaaga la bixiyo si dhakhso leh.
3.Waxaan wadashaqeyn dheer la leenahay shirkado badan oo maraakiib ah iyo muggeena dhoofinta oo badan. Shirkadaha maraakiibta ayaa na siin kara qiimo dhimis wanaagsan.
4.Farsamo yaqaan xirfad yaqaan ah ayaa taageera. Waxaan haynaa koox adeegga iibka kadib wanaagsan. Waxay ku xalin karaan dhibaatooyinkaaga waqtiga.
5.Badeecadaha oo dhan waa la kormeeri doonaa oo la tijaabin doonaa ka hor inta aan la rarin.
6. Macaamilku inuu ku qanco ayaa noo muhiim ah.Haddii aad wax dhibaato ah ama su'aalo ah ka qabtid macaamilkeenna. Fadlan nala soo xiriir Trademanager ama Email.Waxaa looga jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood.
Hore: bacda warqadda
Waraaq digaag ah oo caan ku ah baaldi warqad baaldi cunto dhakhso ah ...